Par Taratra sur 04/10/2019
Basikety 3×3 – World Beach Games » : Ny mpanazatra Mathieu sy i Deda no miandraikitra ny fanazaran-tenan’izy efatra mirahavavy hiatrika ny lalao “World Beach Games”, basikety lalaovin’olona telo, izay hatao any Qatar, ny 13 hatramin’ny 16 oktobra izao. Mizotra tsara izany fanomanan-tena izany etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Fanomanan-tena efa naharitra roa herinandro mahery izay, raha ny fanazavana.
Federasion’ny Lomano: Tsy misy fiovana fa rahampitso asabotsy 5 oktobra no hanatanterahana ny fifidianana izay hitantana ny federasiona malagasy ny lomano, etsy amin’ny Akademia Nasionaly ny Spaoro Ampefiloha. Nanamafy ihany, androany, ny mpikarakara ny fifidianana fa roa ihany ny nirotsaka hofidina fa tsy telo, araka ny feo nandeha. Rabary Hary Jaona sy Ramanantsoa Gabriel no hifaninana amin’izany.
Fiofanana “Jeunes Capitaines”: Hifarana, anio, ny tapany voalohany, amin’ilay fiofanana karakarain’ny Maison du Sport, ho an’ny tanora mpitarika, izay nandraisan’ny tanora 80 mahery anjara. Fifampizarana maro no natao nandritra izay herinandro izay. Isan’ny nandray anjara tamin’izay fizarana traikefa izay ny talem-paritry ny Tanora sy fanatanjahantena eto Analamanga sy ireo manam-pahaizana maro eo amin’ny lafiny fanatanjahantena.